Argagixii Dhacay Iyo Qiimaha Dahabka Iyo Saacadihii Laga Qaatay Di Maria & Marquinhos – Gobolada News Agency
Argagixii Dhacay Iyo Qiimaha Dahabka Iyo Saacadihii Laga Qaatay Di Maria & Marquinhos > OPINION > Argagixii Dhacay Iyo Qiimaha Dahabka Iyo Saacadihii Laga Qaatay Di Maria & Marquinhos
Argagixii Dhacay Iyo Qiimaha Dahabka Iyo Saacadihii Laga Qaatay Di Maria & Marquinhos
gobolada_2fzkly March 16, 2021 March 16, 2021
Xalay, habeen xun oo naxdinle ayay u ahayd Angel di Maria, waxaana uu ka cararay garoonka iyadoo ciyaartu socota kaddib markii telefoonka lagula soo hadley tababare Mauricio Pochettino ee loo sheegay in budhcad ay gudaha ugu jirto guriga laacibkan oo ay haystaan carruurtiisa iyo xaaskiisa.
Tababaraha ayaan haysanin dookh kale oo aan ahayn inuu dibedda usoo saaro Angel di maria, waxaanu u sheegay inuu si toos ah u tago qolka lebbiska iyadoo uu isaguna sii raacay oo uu dhaafiyey kursiga kaydka.
Ciyaartoyda ayaan waqtigaas garanayn wax dhacay, balse Angel Di Maria ayaa isaguna wixii dhacay ka ogaaday tababarihiisa oo usii sheegay.
Sheekada oo dhan waxay ka timid oo telefoonka soo diray agaasimaha ciyaaraha PSG ee Leonardo oo lasoo hadlay tababare Pochettino.
Warbaahinta Faransiiska ayaa dhacdadan ka warramaysay, waxaana arrinta ugu daran ay ahayd in budhcadda guriga u dhacday ay afduub u haystaan labada hablood ee uu dhalay Di Maria iyo xaaskiisa oo gudaha ku jiray.
Si kastaba, warbaahinta RMC ayaa sheegtay budhcaddu ay guriga kasoo galeen goobta jimicsiga ee hoosta, kaddibna ay soo qaateen wiishka oo ay sare ugu koreen dabaqa labaad, kaddibna ay gacanta ku dhigeen alaabooyin qaali ah oo ay ku jiraan dahab iyo saacado.
Laakiin aanay budhcaddu arag labada hablood iyo xaaska Di Maria oo joogay dabaqa hoose ee guriga ee ay budhcaddu markiiba xagga sare u dhaafeen.
Qiimaha dahabka ayaa la sheegay inuu ahaa illaa €500,000 Euro laakiin saacadaha oo iyaguna qaalli ahaa ayaanay warbaahintu helin qiimaha ay taagnaayeen.
Dhacdadan waxa kale oo ku lammaanaa guriga difaaca PSG ee Marquinhos oo isagana ay budhcad kale u dhacday, isla markaana ay ku afduubteen laba hablood oo ay walaalo yihiin oo 30-40 daqiiqadood qol ku xidhnaa, iyagoo guriga ka qaatay lacag kaash ah oo gaadhaysay €2,000 Euro iyo saddex shandadood oo kale oo la rumaysan yahay inay ku jireen alaabooyin qaali ah oo gaadhaya tobannaan kun oo Euro.
Sida ay boolisku sheegeen, budhcaddan u dhacday labada guri ee Di Maria iyo Marquinhos ayaa kala duwanaa.
SAWIRRO: Kooxda Kubadda Cagta Geeska Afrika Oo Taako U Dhigtay Naadiga Heegan Kulan Ka Tirsan Horyaalka SPL.